Torohevitra hanoratana famoahana gazety ho an'ny namana SEO
Home » Lahatsoratra farany farany » Hostpost » Torohevitra hanoratana famoahana gazety ho an'ny namana SEO
Ampitomboy ny fahafaha-manao fahombiazana amin'ny alàlan'ny fanoratana an-gazety matihanina sy SEO. Ny fanambarana an-gazety dia atiny iray manolotra fampahalalana momba ny orinasa amin'ny media. Ny orinasa dia manome ity fampahalalana ity momba ny fandefasana vaovao, fanitsiana, ary ny fivoarana vao haingana toy ny famoahana ny vokatra, ny fandraisana mpiasa vaovao ary ny fanambarana hafa. Ankoatr'izay, ny orinasa manakarama ny serivisy fizarana gazety an-gazety tsara indrindra hahomby amin'ny fampielezan-kevitra amin'ny marketing.
Misarika ny sain'ny mpihaino betsaka indrindra ny fanoratana an-gazety. Ny mpanoratra manam-pahaizana iray dia afaka manome anao ny atiny tianao hovakin'ny mpamaky anao, ary mety ho vahaolana farany hampitomboana ny fahombiazan'ny orinasa izany. Ny sasany amin'ireo torohevitra manan-danja amin'ny fanoratana famoahana gazety namana SEO.
Ilay hevitra tokana
If hanoratra famoahana gazety ianao, dia tsy maintsy miavaka ny hevitrao. Manana hevitra ve ianao? Raha afaka mamorona tantara tsy manam-paharoa amin'ny famoahana gazety ianao dia afaka mahazo mpihaino marobe hatrany. Ankoatr'izay, ny serivisy fizarana gazety an-gazety tsara indrindra dia afaka mampiroborobo ny hevitrao mahatalanjona sy mahatahotra ary samihafa amin'ny Internet. Amin'ny fisoratana anarana sy fandefasana ny atiny amin'ny Internet amin'ny alàlan'ny mailaka, dia afaka ny ho mpanao gazety ianao anio.
Tsy maintsy manoratra amin'ny fomba hamoronana fahalianan'ny hafa amin'ny atiny ianao. Noho izany dia tsy maintsy manintona izy io. Azonao atao ny mamorona zava-miafina hisarika ny sain'izy ireo. Misy horonantsary tutorial ho an'ireo mpanoratra vaovao mila manao ny asa sorany ho asany. Tsy maintsy mifanaraka amin'ny fomba fanoratanao ianao. Ankoatr'izay, tsy maintsy misy plagiarismé tsy manam-paharoa. Aza maka tahaka ny hafa; manoratra foana amin'ny fombanao.
Azonao atao ny manomboka ny fampianarana an-tserasera rehetra. Maimaimpoana ny fampianarana sasany, ary manome tolotra maimaimpoana ho an'ny rehetra ny serivisy. Io no safidy tsara indrindra hahazoana ny fahaizana manoratra tonga lafatra. Ny mpampianatra dia manampy anao hanatsara ny fahaizanao manoratra amin'ny alàlan'ny fampihenana ny adin-tsaina avy amin'ny saina ary hamporisika anao amin'ny fanomezana fahalalana feno momba ireo lohahevitra.
Atombohy ny firafitra
Raha vantany vao kasainao ny tetikasanao fanoratana gazety an-gazety, ny asa fikarohana ary ny famaritana, fotoana mety hanoratanao izany. Amin'izao fotoana izao, mety hanampy raha mifantoka amin'ny lohahevitra izay hosoratanao ianao. Ny fanombohan'ny famoahana gazety dia tokony ho manintona sy mahaliana. Tokony hahaliana ny mpamaky izany. Ny atiny dia tokony ho amin'ny teboka misy ny fehezanteny sy ny fitenenana ary ny fanapahan-kevitr'ireo teny ireo.
Mampiasà teny lakile vitsivitsy
Fantatsika rehetra fa mpanjaka ny atiny, ary ny teny fanalahidy dia manan-danja tokoa hampiasaina amin'ny fanambarana an-gazety raha te hanoratra fanambarana an-gazety namana SEO ianao.
Zahao ny lesoka, ny tantara ary ny ampahany fanampiny, ary koa ny fifantohana samihafa. Tsapanao tsara ny fomba handrakofana ny slip-up anao.
Aza adino, very hevitra ny mpamaky raha tsy vita amin'ny fomba tsara ny fanoratana. Noho ny teny sarotra sy ny teknika sarotra, dia mety hahavery ny hakantony ny famoahana gazety. Hanimba ny ezaka nataonao voalohany izany ary hamela ny mpamaky vokany ratsy. Raha tsy voasoratra araka ny tokony ho izy dia tsy mahomby amin'ny serivisy fanelezana gazety farany tsara izany.